Mateo Asɛmpa No 21:1-46
Yesu tew asɔrefi no ho (12-17)
Ɔdomee borɔdɔma dua (18-22)
Wobisaa baabi a Yesu nyaa ne tumi fii (23-27)
Mma mmarima baanu ho mfatoho no (28-32)
Akuafo awudifo ho mfatoho no (33-46)
Wɔpoo ntwea so bo titiriw no (42)
21 Bere a wɔbɛn Yerusalem na woduu Betfage a ɛwɔ Ngodua Bepɔw* no so no, Yesu somaa asuafo baanu,+ 2 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ akuraa a mo ani tua yi ase. Mudu hɔ ara pɛ, mubehu afurum bi a wɔamantam no ne ne ba. Monsan wɔn, na momfa wɔn mmrɛ me. 3 Sɛ obi bisa ho asɛm a, monka sɛ, ‘Awurade hia wɔn.’ Na ntɛm ara ɔde wɔn bɛma mo.” 4 Nokwarem no, eyi sii na ama nea wɔnam odiyifo no so kae no aba mu. Ɔkae sɛ: 5 “Monka nkyerɛ Sion babea sɛ: ‘Hwɛ! Wo hene reba wo nkyɛn.+ Odwo,+ na ɔte afurum so, yiw, ɔte afurum ba a ne maame soa nneɛma so.’”+ 6 Enti asuafo no kɔe, na wɔkɔyɛɛ nea Yesu ka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ.+ 7 Wɔde afurum no ne ne ba no bae, na wɔde wɔn ntaade nguguso guu wɔn so, na ɔtenaa so.+ 8 Nnipadɔm no mu dodow no ara de wɔn ntaade nguguso sesɛw kwan mu,+ na ebinom nso twitwaa nnua mmaa de guu ɔkwan no mu. 9 Na nnipadɔm no, wɔn a wodi n’anim ne wɔn a wodi n’akyi nyinaa, kɔɔ so teɛteɛɛm sɛ: “Yɛsrɛ wo, gye* Dawid Ba no!+ Nhyira ne nea ɔba wɔ Yehowa* din mu!+ Yɛsrɛ wo, gye no, wo a wowɔ ɔsorosoro noho!”+ 10 Na bere a oduu Yerusalem no, kurow no mu nyinaa yɛɛ gyegyeegye, na nkurɔfo bisae sɛ: “Hena ni?” 11 Nea na nnipadɔm no reka ara ne sɛ: “Oyi ne odiyifo Yesu,+ nea ofi Nasaret a ɛwɔ Galilea no!” 12 Na Yesu kɔɔ asɔrefi hɔ kɔpam wɔn a wɔretɔn nneɛma ne wɔn a wɔretɔ nyinaa fii asɔrefi hɔ, na ɔkekaa wɔn a wɔsesa sika no apon ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no nkongua butubutuwii.+ 13 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Wɔbɛfrɛ me fi mpaebɔ fi,’+ nanso mo de, mode ayɛ baabi a akorɔmfo werɛmfo tetɛw.”+ 14 Na anifuraefo ne mpakye nso baa ne nkyɛn wɔ asɔrefi hɔ, na ɔsaa wɔn yare. 15 Bere a asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no huu anwonwade a ɔyɛe ne mmarimaa a wɔreteɛteɛm wɔ asɔrefi hɔ sɛ, “Yɛsrɛ wo, gye Dawid Ba no!”+ wɔn bo fuwii+ 16 na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Woate nea eyinom reka yi?” Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yiw. Monkenkanee da sɛ, ‘Mmofra ne nkokoaa anom na woama ayeyi afi aba’?”+ 17 Na ogyaw wɔn hɔ fii kurow no mu kɔɔ Betania, na ɔdaa hɔ anadwo no.+ 18 Anɔpatutuutu a ɔresan aba kurow no mu no, ɔkɔm dee no.+ 19 Na ohuu borɔdɔma dua bi wɔ kwankyɛn, na ɔkɔɔ ho, nanso wanhu hwee wɔ so, gye ahaban nko ara.+ Na ɔka kyerɛɛ dua no sɛ: “Worensow aba bio da.”+ Na borɔdɔma dua no wui amonom hɔ ara. 20 Bere a asuafo no huu eyi no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa, na wobisae sɛ: “Adɛn nti na borɔdɔma dua no wui amonom hɔ ara?”+ 21 Yesu buaa wɔn sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, sɛ mowɔ gyidi na mo adwene anhinhim a, ɛnyɛ nea meyɛɛ borɔdɔma dua no nko ara na mobɛyɛ, na mmom sɛ moka kyerɛ bepɔw yi sɛ, ‘Tutu kɔhwe po mu’ mpo a, ɛbɛyɛ hɔ.+ 22 Na biribiara a mubebisa wɔ mpaebɔ mu no, sɛ mowɔ gyidi a, mo nsa bɛka.”+ 23 Afei ɔkɔɔ asɔrefi hɔ, na bere a ɔrekyerɛkyerɛ no, asɔfo mpanyin ne ɔman no mu mpanyimfo baa ne nkyɛn bebisae sɛ: “Tumi bɛn na wode yɛ eyinom? Na hena na ɔmaa wo saa tumi yi?”+ 24 Yesu buaa wɔn sɛ: “Me nso, mebisa mo asɛm baako. Sɛ moka kyerɛ me a, me nso mɛka tumi ko a mede yɛ eyinom akyerɛ mo: 25 Ɛhe na Yohane nyaa tumi a ɔde bɔɔ asu no? Efi soro anaasɛ efi nnipa?” Na wofii ase susuw ho sɛ: “Sɛ yɛka sɛ, ‘Efi soro’ a, ɔbɛka akyerɛ yɛn sɛ, ‘Ɛnde adɛn nti na moannye no anni?’+ 26 Na sɛ yɛka sɛ, ‘Efi nnipa’ a, yesuro nea nnipadɔm no bɛyɛ, efisɛ wɔn nyinaa bu Yohane sɛ odiyifo.” 27 Enti wobuaa Yesu sɛ: “Yennim.” Ɔno nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde me nso, merenka tumi a mede yɛ eyinom nkyerɛ mo. 28 “Mudwen ho dɛn? Ná ɔbarima bi wɔ mma baanu. Ɔkɔɔ nea odi kan no nkyɛn kɔkae sɛ, ‘Me ba, kɔ bobefuw* no mu kɔyɛ adwuma nnɛ.’ 29 Obuae sɛ, ‘Merenkɔ,’ nanso akyiri yi, onuu ne ho, na ɔkɔe. 30 Ɔkɔɔ nea ɔto so abien no nkyɛn kɔkaa saa ara. Oyii no ano sɛ, ‘Agya, mɛkɔ,’ nanso wankɔ. 31 Wɔn baanu no mu hena na ɔyɛɛ nea ne papa pɛ?” Wɔkae sɛ: “Nea odi kan no.” Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, wɔn a wogyigye tow ne tuutuufo redi mo anim akɔ Onyankopɔn Ahenni mu. 32 Efisɛ Yohane ba bɛkyerɛɛ mo trenee kwan, nso moannye no anni. Nanso wɔn a wogyigye tow ne tuutuufo no gyee no dii.+ Na bere a muhuu eyi mpo no, moannu mo ho annye no anni. 33 “Muntie mfatoho foforo: Ná ɔbarima bi wɔ hɔ, ofiwura bi, na ɔyɛɛ bobefuw+ gyee ho ban, na otuu amoa a wokyĩ nsã* wom wɔ afuw no mu, na ɔtoo abantenten.+ Afei ɔde gyaw akuafo bi, na otuu kwan.+ 34 Bere a ɛsow aba no, ɔsomaa ne nkoa kɔɔ akuafo no nkyɛn sɛ wonkogye ne de mmra. 35 Nanso akuafo no faa ne nkoa no, na wɔboroo wɔn mu baako, kum ɔbaako, na wosiw ɔbaako abo.+ 36 Ɔsan somaa nkoa foforo a wɔdɔɔso sen kan de no, nanso wɔyɛɛ wɔn saa ara.+ 37 Awiei koraa, ɔsomaa ne ba kɔɔ wɔn nkyɛn, na ɔkae sɛ, ‘Wɔbɛfɛre me ba no.’ 38 Bere a akuafo no huu ne ba no, wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ, ‘Oyi na obedi ade no.+ Mommra mma yenkum no, na yɛmfa n’agyapade!’ 39 Ɛnna wɔkyeree no, na wɔtwee no fii bobefuw no mu kokum no.+ 40 Enti sɛ bobefuw no wura no ba a, dɛn na ɔbɛyɛ saa akuafo no?” 41 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Esiane sɛ wɔyɛ nnipa bɔnefo nti, ɔbɛsɛe wɔn pasaa na wagye bobefuw no ama akuafo foforo a sɛ ɛsow aba a wɔde bɛma no.” 42 Yesu bisaa wɔn sɛ: “Monkenkan eyi wɔ Kyerɛwnsɛm no mu da sɛ, ‘Ɔbo a adansifo poe no, ɛno na abɛyɛ ntwea so bo titiriw?’*+ Na monkenkanee sɛ, ‘Yehowa* hɔ na eyi fi, na ɛyɛ nwonwa wɔ yɛn ani so?’+ 43 Eyi nti mereka akyerɛ mo sɛ, wobegye Onyankopɔn Ahenni no afi mo nsam, na wɔde ama ɔman a ɛbɛsow aba. 44 Afei nso, obiara a ɔbɛhwe ɔbo yi so no, obebubu pasapasa.+ Na obiara a ɛbɛhwe no so de, ɛbɛyam no.”+ 45 Bere a asɔfo mpanyin ne Farisifo no tee ne mfatoho no, wohui sɛ ɔreka wɔn ho asɛm.+ 46 Ɛwom sɛ na wɔpɛ sɛ wɔkyere no de, nanso na wosuro nnipadɔm no, efisɛ na wobu no sɛ odiyifo.+
^ Nt., “Hosana” anaa “Hosiana.”